Extlọ ọrụ na-ebugharị Ram - China Ram Extrusion Manufacturers, Suppliers
Polymer Vetikal Type tube Ram Extruder Machine PFG600 maka Polymer PTFE tube Dia 300mm-600mm
Njirimara nke tube Ram Extruder PFG600 Site na-aga n'ihu mma, na akụrụngwa bụ echeta, ọzọ mụ na ịrụ ọrụ nke ọma. Ngwongwo a na-ejikwa usoro PLC na-ejikwa ya rụọ ọrụ akpaghị aka. Na iche iche imewe, na akụrụngwa nwere ike izute dị iche iche mkpa nke ọrụ, na-ahaziri maka ndị ahịa. Akụrụngwa ahụ na-agba ọsọ ogologo oge, yana obere mkpọtụ. Ma belata ụgwọ site na ịchekwa ike na ume n'oge nrụgide nrụgide. A na-eme akụrụngwa na ebu.
PTFE tube Ram Vetikal Type Extruder PFG300 Dia 150mm-300mm
Njirimara nke tube Ram Extruder PFG300 Site na-aga n'ihu mma, na akụrụngwa bụ echeta, ọzọ mụ na ịrụ ọrụ nke ọma. Ngwongwo a na-ejikwa usoro PLC na-ejikwa ya rụọ ọrụ akpaghị aka. Na iche iche imewe, na akụrụngwa nwere ike izute dị iche iche mkpa nke ọrụ, na-ahaziri maka ndị ahịa. Akụrụngwa ahụ na-agba ọsọ ogologo oge, yana obere mkpọtụ. Ma belata ụgwọ site na ịchekwa ike na ume n'oge nrụgide nrụgide. A na-eme akụrụngwa na ebu.
Polymer PTFE tube Ram Vetikal Type Extruder Machine PFG150 Dia 20mm-150mm
Njirimara nke Tube Ram Extruder PFG150 Site na-aga n'ihu mma, na akụrụngwa bụ echeta, ọzọ mụ na ịrụ ọrụ nke ọma. Ngwongwo a na-ejikwa usoro PLC na-ejikwa ya rụọ ọrụ akpaghị aka. Na iche iche imewe, na akụrụngwa nwere ike izute dị iche iche mkpa nke ọrụ, na-ahaziri maka ndị ahịa. Akụrụngwa ahụ na-agba ọsọ ogologo oge, yana obere mkpọtụ. Ma belata ụgwọ site na ịchekwa ike na ume n'oge nrụgide nrụgide. A na-eme akụrụngwa na ebu.
Polymer UHMWPE Mkpanaka Ogwe Ogwe Ram Extrusion Machine Dia 25mm-80mm
1. Njirimara nke PTFE （UHMWPE） Ram Rod Extruder PFB20 Site na mmelite na-aga n'ihu, akụrụngwa mara ihe, na-adịwanye mma ma na-arụ ọrụ nke ọma. Ngwongwo a na-ejikwa usoro PLC na-ejikwa ya rụọ ọrụ akpaghị aka. Na iche iche imewe, na akụrụngwa nwere ike izute dị iche iche mkpa nke ọrụ, na-ahaziri maka ndị ahịa. Akụrụngwa ahụ na-agba ọsọ ogologo oge, yana obere mkpọtụ. Ma belata ụgwọ site na ịchekwa ike na ume n'oge nrụgide nrụgide. Akụrụngwa ihe ...
Polymer Vetikal Type Rod Ram Extruder Machine PFB20 Dia 4mm-20mm
Extruder Automatic Machine polima PTFE Rod Ram PFB150 Dia 80mm-150mm